2019 နေ့စဉ် Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ YHT တောင်တက်နှင့်တောင်တက်နာရီ Times သတင်းစာ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီ2019 နေ့စဉ် Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ YHT တောင်တက်နှင့်တောင်တက်နာရီ Times သတင်းစာ
30 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, 11 Bilecik, 26 Eskisehir, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, 42 Konya, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 2
2019 လက်ရှိ, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကိုပုံမှန်အတိုင်း
2019 နေ့စဉ် Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ YHT တောင်တက်နှင့်တောင်တက် Times ကနာရီ: ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်အချင်းချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအလွန်အတူတကွခညျြနှောငျဆက်လက်ဦးချင်းစီကတခြားအစာရှောင်ရထား, ခရီးသည်များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုထံမှကွဲပြားခြားနားသောမြို့များရိုးရှင်းစွာ။ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကားများအမျိုးမျိုးနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအတွက်ခရီးသွားလာအမှုဆောင်ခြင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားမြင့်မားတဲ့နည်းပညာ features တွေနှင့်အတူအကြီးအပျနှံနှင့်ရထားနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်နေကြသည်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD ဒီဧရိယာ၌ဖန်ဆင်းတော်မူသောလူအပေါင်းတို့သည်တီထွင်မှုနှင့်နည်းပညာတိုးတက်လာသငျသညျစနစ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ insatiable များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသွားရန်အမြန်ဆုံးလမ်းပေးထားပါတယ်။
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား - YHT
ကျနော်တို့ကားကိုသှားဖို့ထက်အချိန်တိုအတွင်းရောက်လာနှငျ့သငျ Pullman စကားများ features တွေပိုမိုချွေတာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားသွားလာခွင့်ပြုနှင့်ညစာအပါအဝင်သုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ခွဲခြားထားတယ်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD အဆိုပါအခွန်စနစ်ကနေတဆင့်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်, သင်ကားများအတွက်သွားလာလိုသည့်တဦးတည်းရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဤအရပ်ဌာနများအတွက်လက်မှတ်များရောင်းချလျက်ရှိသောခရီးသည်တင်ကားများများအတွက်ထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းကို၌သင်တို့ကိုဘူဖေးစားနိုင်နှင့်သင်မြို့သားပါရှိသောအစာကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
ဘတ်စ်ကား Connections ကို
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Bursa, Antalya ၏မြို့အချို့မှအလွယ်တကူ access များအတွက် high-speed ရထား YHT လိုင်း Karaman ဘတ်စ်ကားမှဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ထိုမြို့နှင့် paid သဘောတူညီမှုကနေအစာရှောင်ရထားလင့်များသွားကြဖို့အနီးဆုံးဘူတာရုံရရှိနိုင်၏။ ဤရွေ့ကားလင့်များနေသောခေါင်းစဉ်:
Karaman Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားဘတ်စ်ကားဆက်သွယ်မှု
Antalya Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားဘတ်စ်ကားကော်နက်ရှင်
Yüksek hızlı tren kullanacak kişiler aynı zamanda birbirinden farklı indirimlerden de faydalanabilmektedir. Bu indirimler % 20 ile % 50 oranında değişiklik gösteriyor.
ရောက်ရှိလာဘူတာရုံ 20% ကနေရောင်းချအပေါ်တူညီတဲ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းလက်မှတ်တွေရနိုင်သူကိုမှအသွားအပြန်လက်မှတ်။
သူတို့လျှော့စျေးမှဘာသာရပ်ဖြစ်သောကြောင့် 13 26 20% လျှော့စျေးအကြားအသက်လူတို့နှင့်အတူသူတို့ငယ်ရွယ်ရှိသည်။
ပညာရေးဆရာ, ဆရာမများ၏န်ကြီးဌာနပိုင်အသိပေးစာမပါဘဲပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူကျောင်းများ 20% နုတ်မှလက်ျာဘက်ဝင်ငွေ။ ဒီအလျှော့စျေးကျောင်းအုပ်များနှင့်လက်ထောက်ကျောင်းအုပ်, ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များပညာရှင်များနှင့်တူရကီနိုင်ငံသားများနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်အလုပ်လုပ်နေသည့်ဆရာ, ဆရာမများတွင်ပါဝင်နေပါသည်။
လျှော့စျေးလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်% 20 ဖို့တူရကီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်နေတိုးစစ်ဘက်အရာရှိများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်။
လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ 12 12 လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အများပြည်သူ 20% လျှော့စျေးအတွက်လက်မှတ်များဝယ်ယူခွင့်ရှိသည်။
ခေတ်ကာလ 60 အကြားနေသောခရီးသည်များ၏အခွင့်အရေးနှင့်အတူ 65 နှစ်ပေါင်း 20% လျှော့စျေး။
65 50% လျှော့စျေးအခွင့်အရေးအသက်ကျော်နေသောခရီးသည်။
စာနယ်ဇင်းများ၏ချုပ်န်ကြီးဌာနအထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှာပြည်တွင်းသို့မဟုတ်ပြည်ပကသတင်းထောက်တွေနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကဒ်များနှင့်အတူလက်ျာ 20% လျှော့စျေးရှိပါတယ်။
မီးရထားအလုပ်သမားများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများ (အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကလေးများ) 20% လျှော့စျေးမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
7-12 50% လျှော့စျေးသူတို့တစ်တွေသီးခြားထိုင်ခုံခရီးသွားအတွက်သွားလာကြဘူးလျှင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ကြဘူးနှစ်အောက်ကလေးများ7နှစ်ကြားကလေးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ကျနော်တို့ပိုမြန်သူတို့သင်တို့အဘို့ကိုအောက်တွင်စစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားနှင့်ဤရထား၏ features တချို့ကိုခဲ့ကြကြောင်းနိုင်ငံသားများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏နိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်သို့သွားအောင်မြင်ရန်ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြုစုပါတယ်။ TCDD များအတွက်ပို့ဆောင်ရေးသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေအတွင်းမည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုယခုတတ်နိုင်နှုန်းထားများမှာအွန်လိုင်းလက်မှတ်တွေရဖို့စာမျက်နှာကျော်တာနှင့်အတူခေါ်နိုင်ပါတယ်, သင်အဆင်ပြေများနှင့်အခွင့်ထူးခံကဒီခရီးစဉ်ကိုခံစားရန်စတင်နိုင်ပါသည်။
ဇူလိုင်လ 16 2019 အမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) မှ
Bilecik အစ္စတန်ဘူလ်နေ့တိုင်း 08.09-11.49-14.44-19.09,
Bilecik Konya 09.59- 15.18- 21.14 နာရီနေ့ရက်တိုင်း,
Bilecik-09.11-11.39-15.54 ထံမှတူရကီ 17.56-19.42-20.18 နာရီနေ့တိုင်း
အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် shaped ။
Izmir Antalya မြန်ရထားစီမံကိန်း
တူရကီ, အစ္စတန်ဘူလ် YHT
အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတူရကီ, တူရကီ, အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်တူရကီအပြန်အလှန်ရက်ပေါင်းအကြား6အချိန် Operate ။ တူရကီသည်တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်415 မိနစ်နာရီအထိ Pendik ၎င်းတို့၏မှတ်တိုင်များရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်ကျန်း, အသီးသီးPolatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze နှင့် Izmit ကနေထွက်ခွာ။ တချို့ရပ်တန့်မရသောကြောင့်, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါရထားရဲ့ဆိုက်ရောက်သောကာလ၌အချိန်အတန်ကြာလေ့ကျင့်။
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ် YHT အကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
တူရကီ YHT မှအစ္စတန်ဘူလ်
တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား, အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်6နှင့်တူရကီနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အကြားနေ့စဉ်ပျံသန်းမှု operate ။ ကျန်းကျော်အစ္စတန်ဘူလ် Pendik, အသီးသီး Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, တူရကီ, Sincan နှင့်415 နာရီကနေရထားမိနစ်ရောက်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောအချိန်များအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းရထားရဲ့ရောက်ရှိချိန်ကွဲပြားမှုအချို့ဂိတ်များဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါသေခံတော်မူ၏။
အစ္စတန်ဘူလ် YHT တူရကီအပေးအယူများ
အစ္စတန်ဘူလ်တူရကီ YHT သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုပြီးဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
တူရကီ Eskisehir YHT
တူရကီ-EskişehirEskişehirအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတူရကီလိုင်းအတွက်တည်ရှိသောမှတ်တိုင်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်ဤလိုင်းမှတစ်ဆင့်5အချိန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်လည်းတူရကီ-Eskişehirလိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ တူရကီ Eskisehir အချိန်တစ်ရက်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုလုပ်ဖို့611 အချိန်တဦး။ ဒါဟာရေတိုရေရှည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအချိန်ကားများအတွက်စားရန်အရပျမဟုတျပါဘူး။ ကြောင့်မြို့တော်ရဲ့ဘူတာရုံမှတူရကီနှင့် Eskisehir အကြားခရီးမောင်းနှင်မှု၏ 1,5 နာရီအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအစားရထားသွားလာရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ကိုလည်း Anlara- အစ္စတန်ဘူလ်လိုင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှတ်တိုင်နှစ်ခု 'passes ။
အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ဤနေရာတွင်တူရကီESKİŞEHİR YHT ကိုနှိပျ
တူရကီ Eskisehir Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတူရကီလိုင်းအတွက်တည်ရှိသောမှတ်တိုင်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင်ဤလိုင်းမှတစ်ဆင့်5အချိန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်လည်းတူရကီ Eskisehir လိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။6တစ်ကြိမ်, တူရကီ, Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုတစ်နေ့တစ်ကြိမ် 11 ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒါဟာရေတိုရေရှည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအချိန်ကားများအတွက်စားရန်အရပျမဟုတျပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြို့တော်ရဲ့ရထားဘူတာရုံ၏, ဤအချိန်ခရီးသည်ကယ်ဖို့အတော်လေးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခရီး 1,5 နာရီပေါင်းပျမ်းမျှကြာပါတယ်။
တူရကီ Eskisehir YHT အပေးအယူများ
ESKİŞEHİRတူရကီ YHT အကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
တူရကီ, Konya YHT
တူရကီ-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်သာအပြန်အလှန်7စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအချိန်ပျမ်းမျှကြာချိန်နာရီ 1 55 မိနစ်ကြာပါတယ်။ ဒါဟာကျန်းPolatlıရပ်နားအလေးပေး။ နှစ်ဦးကလက်မှတ်ရွေးချယ်စရာစံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပါအဝင်ဤအချိန်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။222+22 Pullman စ Pullman စစီးပွားရေးကိုလူတန်းစားနှင့်စီးပွားရေးလူတန်းစားတည်ရှိသည်ရှိခြင်းတဦးတည်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလှည်းအမျိုးအစားပါ။ အဘယ်သူမျှမထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးရေတိုသက်တမ်းရှိဤအချိန်လို့ပဲ။
တူရကီ Konya YHT အကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
Konya, တူရကီ YHT
Konya-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်7ရက်ပေါင်းလုပ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအချိန်ပျမ်းမျှကြာချိန်နာရီ 1 55 မိနစ်ကြာပါတယ်။ ဒါဟာPOLATLıနှင့်ကျန်းရပ်တန့်အပေါ်အလေးပေး။ နှစ်ဦးကလက်မှတ်ရွေးချယ်စရာစံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပါအဝင်ဤအချိန်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။222+22 Pullman စ Pullman စစီးပွားရေးကိုလူတန်းစားနှင့်စီးပွားရေးလူတန်းစားတည်ရှိသည်ရှိခြင်းတဦးတည်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလှည်းအမျိုးအစားပါ။ အဘယ်သူမျှမထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးရေတိုသက်တမ်းရှိဤအချိန်လို့ပဲ။
တူရကီ, Konya YHT အပေးအယူများ
Konya YHT တူရကီအကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
Konya, အစ္စတန်ဘူလ် YHT
Konya-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားနေ့၏2အချိန်သယ်ဆောင်။ Pendik, အစ္စတန်ဘူလ်ရထားပေါ်တွင်နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။420 နာရီကြာချိန်, ကမိနစ်ကြာပျမ်းမျှအချိန်။ Konya-အစ္စတန်ဘူလ်ရထားမှတ်တိုင်များ, အသီးသီးEskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze နှင့် Izmit ဖြစ်ကြသည်။ သင့်အနေဖြင့်အချိန်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အလှည်းများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပါအဝင်3ကွဲပြားခြားနားသော font ကိုရှေးခယျြစရာနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုလက်မှတ်မဝယ်နိုင်ပါ။ စီးပွားရေးတွင် Pullman စမီးရထား, စီးပွားရေး Pullman စ, Pullman စထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။
Konya YHT အစ္စတန်ဘူလ်အကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အစ္စတန်ဘူလ် Konya YHT
အစ္စတန်ဘူလ် Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား2ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်သယ်ဆောင်။ Konya ရထားပေါ်တွင်နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရထားလမ်းဟာမိနစ်420 နာရီနှုန်းအဖြစ်အချိန်ကာလအတွင်းပြီးစီးခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထား, အသီးသီး Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehirအဆိုပါ pass ကိုရပ်တန့်။ စံများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချိန်နှင့်3အပါအဝင်နှစ်ဦးကလက်မှတ် options များ, ကွဲပြားခြားနားသော font ကိုရှေးခယျြစရာနှင့်အတူကားများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးတွင် Pullman စမီးရထား, စီးပွားရေး Pullman စ, Pullman စထမင်းစားခန်းကားတစ်စီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။ မီးရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများကိုလှည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြား။
အစ္စတန်ဘူလ် Konya YHT အပေးအယူများ
အစ္စတန်ဘူလ် Konya YHT အကြောင်းအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
ပို့ဆောင်ရေး TCDD (သင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်မေးခွန်းများကိုအဘို့အခေါ်နိုင်ပါတယ်444 8 233) သို့မဟုတျတတ်နိုင်နှုန်းထားများမှာအွန်လိုင်းလက်မှတ်တွေရဖို့စာမျက်နှာအတွင်းချက်ချင်းသင့်ရဲ့လက်မှတ်ထွက်တာ, သင်အဆင်ပြေများနှင့်အခွင့်ထူးခံကဒီခရီးစဉ်ကိုခံစားရန်စတင်နိုင်ပါသည်။
16.07.2019 သည့် နေ့မှစ. လက်ရှိအချိန်များအတွက် YHT နာရီ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
ဇူလိုင် 16 သမိုင်းဝင်ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကား Connections ကိုများအတွက် YHT 2019 ထံမှသက်တမ်းရှိ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
တူရကီ TCDD မြန်နှုန်းရထားမြေပုံ
YHT Tanıtım Filmi
တူရကီနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှု Duration ပျံသန်းမှုနာရီ 12 / 07 / 2019 အချင်းချင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသို့ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူသွားလာရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်ပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်လာသည်။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD ဒီလယ်ပြင်၌ရှိသမျှသောတီထွင်မှုများနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့သငျသညျစနစ်သို့ပေါင်းစည်းဖို့အတှကျ insatiable ခရီးသွားခွင့်အလမ်းများအမြန်ဆုံးလမ်းပေးထားပါတယ်။ တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီအကြားအပြန်အလှန်6နေ့စဉ်ပျံသန်းမှု operate ။ အသီးသီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်415 မိနစ်နာရီအထိ Pendik ၎င်းတို့၏မှတ်တိုင်များရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်တူရကီ Sincan, Sincan, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, Gebze နှင့် Izmit ထံမှလေ့။ တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်ရထားအချို့အချိန်တွင်ရပ်တန့်ရန်အဘို့အမြန်နှုန်းမြင့်ရထားရဲ့ဆိုက်ရောက်အချိန်အချို့ခံစားခဲ့ရ ...
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှုအချိန်နှင့်လေယာဉ် Duration 12 / 07 / 2019 တူရကီ YHT တဦးတည်း, နောက်ထပ်အလွန်ကြီးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်စီမံခန့်ခွဲထားပါတယ်သောဤနှစ်ခုလူဦးရေမွို့၌သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အသွားအလာသိပ်သည်းဆမှအစ္စတန်ဘူလ်ကနေအချင်းချင်းမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား။ ပို့ဆောင်ရေး TCDD အပေါငျးတို့သတီထွင်မှုနှင့်ဤလယ်ကွင်းထဲမှာလုပ်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေအလျင်အမြန်စနစ်သို့ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ခရီးသည်နှင့်အတူဤအမြန်နှုန်းမြင့်ရထားပျော်စရာနဲ့ပျော်စရာခရီးတစ်ခုအခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းပြီ။ အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား, တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီအကြားအပြန်အလှန်6နေ့စဉ်ပျံသန်းမှု operate ။ ကျန်းကျော်အစ္စတန်ဘူလ် Pendik, အသီးသီး Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, တူရကီ, Sincan နှင့်415 နာရီကနေရထားမိနစ်ရောက်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ ...
တူရကီ-Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှုအချိန်နှင့်လေယာဉ် Duration 30 / 08 / 2019 တူရကီ-Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများနာရီတောင်တက်နှင့်တောင်တက် Times သတင်းစာ: Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်-တူရကီ-Eskişehirအမြင့်မြန်နှုန်းရထားတူရကီလိုင်းအတွက်တည်ရှိသောမှတ်တိုင်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တူရကီ-Eskişehirမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားနေ့တိုင်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ သင်ဤလိုင်းမှတစ်ဆင့်5အချိန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်ချိန်တည်းမှာတူရကီ-Eskisehir လိုင်းလည်းထည့်သွင်းထားပါသည်။ တူရကီ-Eskisehir အချိန်တစ်ရက်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းကိုလုပ်ဖို့613 အချိန်တဦး။ ဒါဟာရေတိုရေရှည်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအချိန်ကားများအတွက်စားရန်အရပျမဟုတျပါဘူး။ သောကြောင့်တူရကီ-Eskişehirရဲ့ခရီး၏မြို့ရဲ့အဓိကရထားဘူတာရုံ၏ 1,5 နာရီအကြားကြာပါသည်။ ဒီအ ...
Eskişehirတူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှုအချိန်နှင့်လေယာဉ် Duration 12 / 07 / 2019 အဆိုပါအချင်းချင်းမြန်နှုန်းမြင့်အတွက် TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူလေ့နှငျ့သငျအနည်းငယ်သာသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးအတွက် Eskisehir နှင့်တူရကီမှာတည်ရှိပါတယ်သူတို့အပြင်းအထန်နှင့်တက်ကြွစွာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားကိုအသုံးပြုဖို့လူအစုအဝေး၏လူဦးရေနှင့်အတူနှစ်ခုအကြီးဆုံးမြို့ကြီးများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်, ကျောင်းသားများထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့, ဤစနစ်များ Eskisehir နှင့်တူရကီရဲ့ကျောင်းသားစွမ်းရည်အလွန်အသုံးဝင်နှင့်အချိန်ချွေတာဖြစ်ပါတယ်။ Eskisehir-တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားEskişehirတူရကီလိုင်းအတွက်တည်ရှိသောမှတ်တိုင်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစုစုပေါင်းခရီးသည်သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှ5ဒီလိုင်းကို။6အချိန်, အ Eskisehir-တူရကီတဦး ...
တူရကီ Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများတောင်တက်နှင့်တောင်တက်နာရီ Times သတင်းစာ 12 / 07 / 2019 အဆိုပါတူရကီ-Konya YHT ဖြစ်သောတူရကီမှမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားတစ်ခုမှာ။ ကိုအလွန်ဤစီမံကိန်းတူရကီနှင့်အတူ 1 50 နာရီကနေ Konya မိနစ်အချိန်ချွေတာခြင်းနှင့်အသက်ပေတည်းလွယ်ကူချောမွေ့။ အထူးသဖြင့်, အလုပ်နှင့်ပညာရေးခရီးသွားပြုကြလိမ့်မည်သူကိုခရီးသည်အဘို့ဤမြန်နှုန်းမြင့်ရထားအတော်လေးအကျိုးရှိခြင်းနှင့်ချွေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေးတူရကီပြည်နယ်မီးရထားမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများနည်းပညာနှင့်ခေတ်မီနည်းစနစ်များအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးစနစ်ကဒီဦးတည်ချက်အတွက်အပေါငျးတို့သနည်းပညာများပေါင်းစပ်ပေးနိုင်သည်။ တူရကီ-Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားတစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ်သာအပြန်အလှန်7စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချိန် 1 50 နာရီမိနစ်ပျမ်းမျှကြာချိန် ...
2019 နေ့စဉ် Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
2019 Express ကိုရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
2019 အမြင့်မြန်နှုန်းရထား Shuttle နာရီ
လက်ရှိမြန်နှုန်းရထား Shuttle နာရီ
လက်ရှိအမြင့်မြန်နှုန်းရထား Shuttle နာရီ
TCDD YHT ပျံသန်းမှုနာရီ
သြဂုတ်လ 30 မင်္ဂလာအောင်ပွဲခံနေ့!
ဝယ်လက်မှတ် YHT | high-speed ရထားလက်မှတ်တွေ
အဆိုပါရောင်းချမှုvar.özelliklထံမှမတရားကြိုးခံစားရသူမီးရထားခရီးသည် ::; ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့်ဒုတိယဝန်ကြီးများ ... ... ... ဥက္ကဌmensupları..meclisယေဘုယျန်ထမ်းများရဲ့စာနယ်ဇင်း akademisyenler.muhtarlar.sporcu ... ညြဥက္ကဋ္ဌ ydkurul üye..tbmmအဖွဲ့ဝင်များrefakcıları..başbakanlık .. vs..asker ကျွမ်းကျင်သူများက ... ညြစာနယ်ဇင်းmensupları..bဖိလစ်ပိုင်ဆင်းရဲသားတို့ကို? yetimm ငါ့ဝင်ငွေ ?? .. ငါ့ကိုတော်ပီဒို။ indirimda yrarlan သူတို့ထောက်ပံ့ပေးခံရဖို့မရှိကြပေ။ mses နှင့်ဝင်ငွေမရှိဘဲအလုပ်လက်မဲ့ disable ချမ်းသာကြွယ်ဝနှင့်တော်ပီဒိုရဲ့yararlanıyor.bnişdမသန်စွမ်းအကြိုးရှိမထားဘူး။ အဆိုပါသူဌေးလည်းဤနေရာတွင်စာဖြင့်ရေးသားအထူးလျှော့စျေးမှအကျိုး။ ... ..kul ညာဘက်အလုပ်မှာသက်တမ်းတိုးမည်။ ဆုံးမ
Levent Ozen ဟုသူကဆိုသည်:
YHT - ထိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား-to-date ဖြစ်အောင်သတင်း rayhaber ထံမှလိုက်နာရနိုငျသညျ!
Konya နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှု Duration ပျံသန်းမှုနာရီ
အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Konya မြန်ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှု Duration တောင်တက်နာရီ
တူရကီ Konya အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများပျံသန်းမှုအချိန်နှင့်လေယာဉ် Duration
တူရကီအစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားပြရန်ငွေမည်မျှ? .. TCDD နေ့စဉ်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား Shuttle နာရီ Daily သတင်းစာ 2019